बिजनेस लञ्चमा जाँदै हुनुहुन्छ ? पूर्वतयारी गरेमा राम्रो, यी गल्तीबाट बच्नुस् – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ बिजनेस लञ्चमा जाँदै हुनुहुन्छ ? पूर्वतयारी गरेमा राम्रो, यी गल्तीबाट बच्नुस्
बिजनेस लञ्चमा जाँदै हुनुहुन्छ ? पूर्वतयारी गरेमा राम्रो, यी गल्तीबाट बच्नुस्
पुलेसो १३ माघ, २०७७, मंगलबार १२:३४
बिजनेस लन्चका लागि अफर आएको छ भने तपाईंले केही कुराहरुमा पूर्वतयारी गरेमा राम्रो परिणाम आउँछ।
साथीभाइ वा परिवारसँग त तपाइ धेरैपटक लन्चमा जानुभएको होला । तर बिजनेस लन्च यो भन्दा फरक कुरा हो। यो तपार्इले गर्ने विशुद्ध विजनेस मिटिङ नै हो तर यो सामान्यतया कुनै रेष्टुरेन्टमा गरिन्छ । कुनै अर्को संस्थाको ब्यक्ति जोसँग तपार्इको प्रत्यक्ष्य ब्यावसायिक सम्बन्ध बनिसकेको छैन त्यस्ता ब्यक्तिहरुसँग सम्बन्ध बनाउनकै लागि यस्ता बिजनेस लन्च तय गरिएको हुन्छ।
यस्तो बेला के कस्ता कुराकानी गर्ने र के के कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने जानेमा तपाईंको बिजनेस लन्चले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ।
बिजनेस लन्चको एकमात्र उद्देश्य भनेकै दुवै पार्टीको हितमा बिजनेस सम्झौताहरु गर्ने वातावरण तयार पार्नु नै हो।
तपाइले यो समयलार्इ सामान्य लन्चका रुपमा लिनुहुँदैन। एक्सपर्टहरुले बिजनेस लन्चमा गर्न नहुने कामहरु सुझाएका छन् ।
बिजनेस लन्च भन्ने बित्तिकै खानासँगैको वार्ता हो। यसैले बिजनेस लन्चका लागि पहिलो कुरा रेष्टुरेन्ट छनौट हो। तपार्इले यस्तो रेष्टुरेन्ट छान्नुपर्छ जसमा शान्त र सन्तुलित ‘एम्बियन्स’ होस्।
लिडरसिप कन्सल्ट्यान्ट जेनी फ्लिन्टफ्टका अनुसार चर्को आवाजमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकु बज्ने रेष्टुरेन्ट चयन गर्नुहुँदैन। रेष्टुरेन्ट यस्तोपनि नहोस् कि जहाँ मुर्दा शान्ति छाएको होस्। मानिसहरुको उपस्थिती नै पनि नहोस्। ुब्यालेन्स्डु वातावरण भएको रेष्टुरेन्ट चयन गर्नुपर्छ।
रेष्टुरेन्टको चयन पछि अर्डर गर्ने खानाको छनौट सहि हुनैपर्छ। ‘राइट डिस’ भएन भने तपार्इको ध्यान वार्तामा भन्दा खानामा बढी जान्छ।
खानका लागि समस्या हुने किसिमको खानेकुरा चयन गर्नुहुँदैन। दाँतमा अड्किने किसिमका खानेकुराहरु र हाड र काँडाहरु भएका खानेकुराहरु धेरै ससहरु राखिएका खानेकुराहरु सकेसम्म अर्डर गर्नुहुँदैन।
बिजनेस लन्चमा पार्टीसँग विजनेसका कुराकानी गर्न सकियोस् न कि खानासँग संघर्ष गरिरहनुपरोस्।
तपाइले भेट्ने मानिसको बारेमा केही सामान्य जानकारी राख्नुपर्छ। उ कुनै धार्मिक वा साम्प्रदायिक कुराहरुमा झुकाव राख्ने किसिमको मानिस हो की अथवा उ कुनै धार्मिक आस्थाका कारण विशुद्ध शाकाहारी पो छ कि सबै कुराको ध्यान पुर्याउनै पर्छ।
रेष्टुरेन्ट छनौट भैसकेपछि र खानाको बारेमा केही ‘माइन्ड मेकअप’ गरिसकेपछि अब तपाइले के पेय पदार्थ लिन उचित हुन्छ त्यो पनि जान्नैपर्ने हुन्छ ।
बेलायतका एटिकेट एक्सपर्ट जो ब्रेयन्टका अनुसार बिजनेस लन्चमा अल्कोहल निषेध गरिएकै राम्रो। अल्कोहलको प्रवेशले बिजनेसका कुराहरुभन्दा अन्य कुराहरुमा ध्यान जाने हुँदा अल्कोहल नलिन उनी सुझाव दिन्छिन् ।
उनी भन्छिन् एक वा दुर्इ पेग लिँदा ‘रिल्याक्सिङ मुड’ पैदा हुन सक्छ जुन कारण पछि तपार्इंले पछुताउनुपर्ने हुन्छ। बिजनेस लन्चका बेला कहिल्यै बिर्सिनु नहुने कुरा के हो भने तपाइ आफ्नो योजना र काममा फोकस्ड हुनै पर्छ र प्रोफेसनल हुनै पर्छ।
लन्डनका बिजनेस कोच फिल जोन्सका अनुसार वार्तामा बसेका अर्को पक्षलार्इ भने ड्रिंक अफर भने गर्न सकिन्छ। कहिलकाँही यहि अफर तपाईंको लागि लाभदायक सावित हुन सक्छ ।
बिजनेस लन्चमा राजनीतिक र ब्यक्तिगत विषयमा पनि प्रवेश नगर्नु उचित हुन्छ । केही विषयहरु हुन्छन् जसबारेमा टिप्पणी नगर्दा नै मानिस सहज हुन्छ ।
राजनीति, धर्म, सम्प्रदाय, सेक्स, कम्पनीको बारेमा सुनिएका हल्लाहरु तथा आफ्नै कम्पनीका बारेमा कसैले फैलाएको नकारात्मक कुराहरु पनि बिजनेस लन्चमा गर्नु हुँदैन।
खाना खाइसकेपछि जुन पक्षले लञ्चकालागि निम्ता दिएको हो उसैले बिल तिर्नुपर्छ। बिल आएपछि हुने अलमलको वातावरणलाई लञ्चमा निम्त्याउने पक्षले नै सहज बनाइदिनुपर्छ।बिजमाण्डु